Archive du 20190219
Marais Masay Fiara 4x4 Tucson namono mpandeha an-tongotra
Nisehoana loza mahatsiravina indray teny amin’ny Marais Masay omaly alatsinainy18 febroary hariva tokony ho tamin’ny 6 ora latsaka fahefany teo.
Atletisma Malagasy Ho fety be any Antsirabe amin’ny Semi-Marathon
Ho fety be tokoa any amin’ny tanànan’Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra amin’ny sabotsy 09 martsa 2019 ho avy izao, hoy ny filohan’ny Federasion’ny taranja fototra Atletisma Malagasy Rtoa Norolalao Andriamahazo,
Ligin’ny Volley Analamanga Hotanterahina amin’ny sabotsy izao ny fivoriambe
Araka ny fantatra dia hotanterahina etsy amin’ny LTC Ampefiloha amin’ny sabotsy 23 febroary maraina izao ny fivoriamben’ny ligin’ny taranja volley-ball eto Analamanga hifidianana an’ireo mpikambana vaovao hitantana mandritra ny 4 taona ho avy.
Fita-bitro no betsaka !
Mitamberina ao an-tsain’ny maro ny adihevitra samihafa tamin’ireny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ireny.
Fampandrosoana ara-toekarena Tokony hiara-dalana ny vina sy ny statistika
Hoentina ampiroboroboana ny fanangonana ny tarehimarika eto Madagasikara ny Stratejia Nasionalin’ny Fampandrosoana ny Statistika (SNDS) izay tsy vita tamin’ny taona lasa teo.
Sekoly ambony INSPNMAD Namoaka mpampivelona sy mpitsabo mpanampy 333 isa
Ny hampitomboana ny isan’ireo mpampivelona sy mpitsabo mpanampy manerana ny Nosy no tena tanjon’ny sekoly ambony Inspnmad hahafahana mampihena ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana.
Famonoana mompera Hitory izay nahavanon-doza ny Katolika
Manana ny tsiambaratelon'ny famotorana ny mpitandro ny filaminana mikasika ilay fanafihana tao Mahitsy tamin'ny sabotsy heriny ka miandry isika. Hitory ny nahavanon-doza ny Fiangonana.
Fakana an-keriny - Ambohimangakely Mpivady sy ny vadikelin’ny takalon’aina no atidoha
Sakaiza manody ! Mpivady nampangain’ny akanjony sy ny fitakiana omby nataon’ny olon-tian’ilay vehivavy nalaina an-keriny no voarohirohy tamina kidnapping ka tratran’ny Borigadin’ny zandary teo Ambohimangakely, ny talata 12 febroary teo.
LOZAM-PIARAKODIA RN4 sy RN13
Nitrangana lozam-pifamoivoizana fiara mpitatitra olona ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-13, omaly. Fiara marika “Sprinter” iray hihazo an’i Mahajanga no tra-doza omaly antoandro tamin'ny faritra Ankazobe, PK 99+400m.
Karama farany ambany 200 000Ar Tsy nisy resaka intsony
Vao tonga eo amin’ny fitondrana dia hakarina ho 200 000 Ar ny karama farany ambany, hoy i Andry Rajoelina tamin’ny adihevitra nifanaovany tamin’i Marc Ravalomanana tamin’ny 16 desambra 2018.
AMPITATAFIKA ATSIMONDRANO Hanatanterahana ilay tetikasan’ny filoha ihany koa
Kaominina maro no hosahanin’ilay tetikasan’ny filoham-pirenena hotanterahina eto amintsika. Ankoatra ny eny amin’iny faritr’Ivato iny dia anisan’ny voakasika ihany koa ny eny Ambohidrapeto Itaosy, Ambohitrimanjaka, Ampitatafika …
Fepetra vonjimaika ny amin’ny delestazy Nampitomboina avo roa heny ny tahirin-tsoliky ny JIRAMA
Manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny izay nahatonga fahatezerana sy fingerongeronana tamin’ny maro tato ho ato dia nisy ny fiaraha-midinika tambony latabatra nataon’ny minisitra sy ny tompon’andraikitra tao amin’ny JIRAMA ary ireo mpiara-miombon’antoka misehara amin’ny solika rehetra.
Kaominina Ivato Tsy manana olana amin’ny fandraisana ilay tetikasan’ny filoha
Tsy manana olana amin’ny fandraisana ireo tetikasan’ny filoham-pirenena ny kaominina Ivato, raha ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa omaly.
Lakandrano manodidina an’i Besarety Amboarina hatao “beton”
Hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana ireo lakandrano manodidina an’i Besarety Boriboritany faha-3, Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA),
Faritra atsimo atsinanana Nahazo fanampiana ireo traboina vokatry ny hain-trano
Mahatsiaro mijaly ireo traboina 218 tafo vokatry ny hain-trano any amin’ny Faritra atsimo atsinanan’ny Nosy. Ankoatra ny tsy mbola fananan’izy ireo trano hitoerana mantsy dia hifampitadiavana ihany koa ny hanin-ko hanina isan’andro.
Fandripahana ala eto Madagasikara Teknolojia avo lenta no hanara-maso
Tanjona ny famerenana amin’ny laoniny ny ala sy ireo valan-javaboary eto Madagasikara.